Nisy ny fifampidinihana an-databatra boribory notarihin’ny minisitry ny angovo, ny rano ary ny akoranafo, Vonjy Andriamanga, ny alahady lasa teo, nijerena ny fomba hanamaivanana ny fahasahiranan’ny mponina amin’ny olan’ny famatsian-drano madion’ny JIRAMA. Tapaka nandritra ity dinika ity fa hovahana sy hohamafisina ny fitsinjarana rano amin’ny alalan’ny kamiao « citernes » ka hisy ny fametrahana « citernes » 5 hatramin’ny 10m3 eny amin’ireo fokontany izay tena ianjadian’ny tsy fisian-drano. Hifampidinika amin’ny kaominina sy ny fokontany voakasika ny tompon’andraikitra eto anivon’ny orinasa JIRAMA, amin’ity herinandro ity, hahafahana mandrindra ny asa sy mametraka olona hiandraikitra ny fizarana rano. Toy ireny maka rano amin’ny paompin’ny daholobe ireny ny mpanjifa ka hisy ny sarany haloan’izy ireo, izay tsy mbola voafaritra. Ho vahaolana maharitra kosa dia hisy ny fikarohana ireo loharano azo trandrahana hamokarana rano. Ho an’ny faritra andrefan’Antananarivo dia voaresaka ny tetikasa hanaovana « forage » miisa enina, eny Ambohidrapeto ka vinavinaina hotanterahina amin’ity herinandro ity ny fitrandrahana andrana ny fitosahan’ny rano « débit » eny an-toerana. Ampahatsiahivina fa misy ihany koa ny tetikasa hiarahan’ny orinasa JIRAMA sy ny BEI (Banque Européenne d’Investissement) izay miompana indrindra amin’ny fanatsarana ny tambajotra fitaterana rano eto Antananarivo ary ny fampitomboana ireo tobim-pamokaran-drano. Vinavinaina hatomboka amin’ny voalohan’ny taona 2020 ity tetikasa ity. Mialoha izany dia taterina hatrany fa mandroso ilay asa fanorenana tobim-pamokaran-drano eny Amoronankona, izay afaka hamokatra rano 200 m3 isan’ora. Andrasana afaka herinadro vitsivitsy ny fahavitan’ny asa.